ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : (37) My flat-mate's pregnancy & her weight-gain fobiea
(37) My flat-mate's pregnancy & her weight-gain fobiea
သူမက အရင်က model မတစ်ဦးပါ။ သူမရဲ့partner က သူမမှာ ကိုယ်ဝန် ရှိနေတယ် လို့ အသိပေးလိုက်တဲ့ နေ့ မှာ သူမကို ပက်ပက်စက်စက် ပြောပြီး စွန့် ခွာသွားပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်စရှိပြီလို့စသိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပထမဆုံး စီးကရက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။
နေ့ စဉ် သောက်နေကျ ပမာဏ ကိုတဖြေးဖြေးလျှော့ ချပြီး။ ultrasound result မှ သားယောင်္ကျားလေး ရမယ်ဆိုတာသိသိချင်း ထိရောက်စွား စီးကရက်ဖြတ်နိုင်ဖို့counselor ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ nicotin patch ကိုလက်မောင်းမှာ ကပ်ပြီး စီးကရက်ဖြတ်တာ ကိုယ်ဝန် ၅လကျော်မှာ ပြတ်သလောက် နီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။
pregnancy hormone ကြောင့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ခန္ဒာကိုယ်ပုံပန်းကို မကြာခဏကြည့်ရင်း ကလေးမွေးဖွားပြီးရင် သူမရဲ့ အလုပ်အကိုင်ဖြစ်တဲ့model အလုပ်ပြန်လုပ်လို့မရမှာ ကို တွေးပူနေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးမှာကို ပူပန်ပြီး အစားကို ဖြစ်ဖြစ်မြှောက်မြှောက် မစားတာကြောင့် တနေ့ မြို့ ကိုသွားရင်း သူမ bus ကားပေါ်မှာ မူးလဲပါတော့တယ်။ ဆေးရုံရဲ့ A&E မှာ သူမကို ကုသပြီး။ ဗိုက်ထဲက ကလေးရော သူမပါ အခြေအနေ ကောင်းမွန်လာတာကြောင့် ၂နာရီအတွင်း discharge လုပ်လိုက်ပါတယ်။
ခေါင်းမာတဲ့ သူမ ယနေ့ အထိ အစားကို ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မစားပါဘူး။ သူမအကြာက်ဆုံးက postnatal weight gain မို့ နောက်မှ နောင်တမရအောင် အခုထဲက အစားသိပ်မစားတာပါတဲ့ ရှင်။ ကျမက သူမကို " at the moment, your baby rely on what you eat, he needs to get enough supply to develop his organs, eg brain, hearts, respiratory system, digestive system. If there is no food supply, it would be really difficult to survive. If something gone wrong, you will regret for your whole life. so I would like to suggest you to eat properly (at least one proper mealaday) for the sake of your child." လို့အစားကို နည်းနည်းနဲ့ ပုံမှန်စားဖို့persue လုပ်ပါတယ်။
အခု တော့ သူမ အစားနည်းနည်း ပြန်စားလာပါပြီ။ အရင်တုန်းကဆို ရင် သူမဟာ တနေ့ လုံးအငတ်ခံပြီး ညဘက်ကျမှ salad ပွဲ သေးသေးလေး စားတတ်ပါတယ်။းmodel တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် လူတွေဟာ အစာငတ်ခံ ရတာရင် ဘုရားဟောထားတဲ့ပြိတ္တာတွေကို မြင်ယောင်မိပါတယ်။ "မြင်သာမြင်ရ၊ မစားရသည့် တောကပြိတ္တာ ဖြစ်မည်တည်း" ဆိုတဲ့စကားကို ပြန်မှတ်မိပါတယ်။
ကျမတော့ နည်းနည်းပိန်ချင်ပါတယ်။ ပြိတ္တာတယောက်လို လဲ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ နည်းနည်းပိန်ပြီး လက်မောင်းမှာ ကြွက်သားနည်းနည်း နဲ့ဗိုက်မှာ6patches ကြွက်သားမြောင်း နည်းနည်း နဲ့ ခြေထောက်က အဆီတွေကို ကြွက်သားအဖြစ် ပြောင်းနိုင်ရင် တော်တော် ကောင်းမည်။ ကျမတို့ လူသားတွေမှာ လဲ ရတာမလို လိုတာမရ မဟုတ်ပါလား။ ကိုယ်မှာရှိတာနဲ့တင်းတိမ်ရောင့်ရဲ နိုင်ဖို့တော်တာ် ခက်ပါသည်။